Mogadishu Journal » 2019 » June » 2
Maamulka Puntland oo cafis u fidiyay 121 maxbuus
Mjournal :-Madaxweyne Ku-xigeenka Maamul Goboleedka Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu cafis u fidiyey maxaabiis munaasabadda Bisha Ramadaan iyo Ciidul-fitriga awgeed. Maxaabiistan ayaa waxaa ay ku kala xiran...
Madaxweyne Farmaajo oo safar deg deg ah ku tagay Addis Ababa
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wafdigii uu horkacayey ayaa saaka ka degay magaalada Adis abab ee dalka Itoobiya. Safarka Madaxweynaha ee Addis ababa ayaa ahaa mid aan hore loo shaacin oo degdeg ah ka dib markii isaga iyo wafdigiisa ay ka duuleen...
Mjournal :-Maamulka dalka Tunisia ayaa hor istaagy in 75-muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay badweynta ay soo galaan dalkasi,sida laga soo xigtay kooxo qaabilsan Xuquuqul Insaanka iyo Kabtankii waday Markab soo badbaadiyay dadkaasi. Muhaajiriintaasi iyo dooni ay la socdeen...
Mjournal :-Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in hadda kaddib dadka soo dalbanaya fiisooyinka ama dal-ku-galka Mareykanka looga baahanyahay in ay soo gudbiyaan teleefannadooda, e-mail-adooda iyo cinwaanada ay ku leeyihiin baraha bulshada. Sharcigan cusub ayaa...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa muujiyay wel welka uu ka qabo Xaaladda Siyaasadeed Murugsan ee ka taagan Galmugud. Waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in tafaraaruq la kala dhex dhigo Dadka Reer Galmudug,waxaana baaq uu u...
Mjournal :-Saacadihii la soo dhaafay waxaa roobab daadad wata ay ka da’een deegaano ka tirsan gobolada Bari iyo Nugaal,waxaana roobaabkaas saameyn ku yeesheen deegaano ka tirsan Puntland. Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Roobka uu jaray wadooyinka ka baxa iyo kuwaas...
Liverpool claim their sixth European Champions League title with 2-0 win over Tottenham Hotspur. An early goal from Mohamed Salah and a late one from Divock Origi gave Liverpool a 2-0 win over Tottenham Hotspur in Saturday’s all-English Champions League final as coach...
Mjournal :-Rag hubeysan ayaa xalay waxaa ay weerar ku qaadeen Xarunta Maamulka deegaanka Garas-Baaleey ee duleedka Magalada Caasimadda ah ee Muqdisho. Qaar ka mid ah ilaalada Xarunta deegaanka Garas-Baaleey oo ku taalla dhabarka dambe ee Jaamacadda Shabeelle iyo ragga weerarka ku...
Liverpool oo markii 6aad ku guuleysatay Koobka Champions League
Mjournal :-Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa markii 6aad ku guuleysatay Koobka Horyaalada Qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, kaddib markii ciyaartii kama dambeysta ee Finalka ay 2-0 uga adkaatay Tottenham. Liverpool ayaa aheyd kooxda loo saadaalinayay koobkan, kaddib...